Nagu saabsan - Dharka Dharka Dharka ee Shirkadda Co., Ltd.
Angel Dharka Qalabka Qalabka Co., Ltd.waa wax soo saar xirfad leh oo goosashada ah, laba qaybood oo aan la aamusin karin; Debecsan, xarig aan kala go 'lahayn, iyo ku dhowaad kun nooc oo qalabka wax soo saarka ah soo saarista shirkadaha ganacsiga farsamada sare. Waxaa ka go'an dharka dharka jumlada iyo dhammaan noocyada qalabka naqshadeynta, horumarka, wax soo saarka iyo iibinta. Shirkadeena waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, sida midabaynta, alaabada xargaha ee leh iska caabinta iftiinka, caabbinta heerkulka sare, iska caabbinta biyaha, iska caabbinta, ha libdhin iyo astaamaha kale, badeecada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dharka, kabaha, koofiyadaha, boorsooyinka, alaabada carruurtu ku ciyaarto, gawaarida, farsamada gacanta, qalabka caafimaadka iyo warshadaha kale oo ah qalab caawinaad ah. Shirkaddayadu waxaa la aasaasay sanadkii 2010, waxayna ku taal magaalada wax soo saarka adduunka caanka ku ah - Dongguan. Iyada oo dadaallada wadajirka ah ee dhammaan xubnaha shirkadeena, Angel Garment Accessories ay noqotay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka wanaagsan ee dal iyo dibadba.
Shirkadeena tan iyo markii la aasaasay, "hadafka ganaaxa, tayada abuurista qiimaha" sida fikrada maamulka shirkadu u hogaansamayso "xirfadlaha, heelan, sii wanaajinta, wax ku oolka ah, dhakhsaha badan, macaamilka ugu horeeya" falsafada ganacsiga iyo "maaraynta sayniska, wax soosaarka badbaadada ; tayo sare leh, qanacsanaanta macaamilka "siyaasada tayada leh, hada ganacsigeena shirkadeena marka lagu daro suuqa gudaha wuxuu leeyahay horumar xasiloon, sidoo kale wuxuu dhaliyay goolal dalal badan oo adduunka ah. Shantii sano ee la soo dhaafay, shirkadda leh alaab tayo sare leh iyo qaab ganacsi oo qumman, ganacsigu wuxuu ahaa horumar deg deg ah, warshadaha kaabayaasha dharka ayaa ku fadhiistay boos muhiim ah.
Codsiga Badeecada: Waxaa loo adeegsaday dharka, daaweynta, isboortiga, dhaansiga, boorsooyinka, kabaha, koofiyadaha iyo warshadaha kale
Shahaadadayada: SGS, Oeko-Tex
Shirkaddu waxay soo bandhigtay in ka badan 100 nooc oo ah qalabka dharka dunnida oo horumarsan adduunka, sida mashiinka wax lagu tolo oo xawli sare ku shaqeeya, mashiinka weelka dharka jacquard kombiyuutarka, mashiinka daabacaadda wareejinta wareejinta shaqooyinka badan, mashiinka daabacaadda dijitaalka ah, sumadda tolmo wanaagsan, Swiss sumadda sumadda mashiinka calaamadaha tolidda, mashiinka daabacaadda Heidelberg iyo wixii la mid ah
Wax soo saarka ayaa badanaa lagu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Mareykanka iyo warshadaha dharka ganacsiga ee gudaha. Tayada ayaa xasilloon oo mugga iibku si joogto ah ayuu kor ugu kacayaa. Hadda wareejinta billaha ah waxay gaari kartaa 3 milyan.
Si taxaddar leh u xaqiiji xafiiska muunadda iyo shuruudaha macaamiisha ka hor iibka, si dhow ula soco horumarka wax soo saarka inta lagu jiro iibka, xakameynta tayada wax soo saarka, samee shaqo wanaagsan oo ah kormeer tayo leh, iyo la socoshada isticmaalka macaamiisha iyo khibradda waqtiga iibka ka dib.